नवलपुरका सिडिओ पंगेनी सहित पाँच राष्ट्रसेवक ईन्टीग्रिटी आईकनबाट सम्मानित - Nawalpur News
२०७८ कार्तिक ३, बुधबार प्रकाशित (३ महिना अघि) ४६६ पाठक संख्या
नवलपुर । प्रतिकुल समयमा पनि नागरिकलाई चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाह गरेवापत पाँच राष्ट्र सेवकहरु ईन्टीग्रिटी आईकन २०२१ बाट सम्मानित भएकाछन ।
सम्मानित हुनेहरुमा नवलपुर जिल्ला नवलपरासी ( बर्दघाट सुस्ता पुर्व ) कि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पंगेनी , भेरी अस्पतालकि नर्सिङ अधिकृत शिला शर्मा , भाषा आयोग मातृभाषा शिक्षा शाखाका प्रमुख डा. लोक बहादुर लोप्चन , मकवानपुर गढी गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत चन्द्रकान्त चौधरी र भक्तपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.सुमित्रा गौतम हुनुन्छ ।
इमानदार राष्ट्र सेवकहरुको पहिचानको साथै राज्य सम्यन्त्र चुस्तरुपमा नागरिक समक्ष आउने उद्देश्यका साथ यस प्रकारको सम्मान अभियान सुरु गरिएको एकाउन्टबिलिटी ल्याब नेपालले जनाएको छ ।
साथै सन २०१४ मा नेपाल बाट सुरु यो सम्मान अभियान हाल बिश्वको १५ देशमा बिस्तार भैसकेको एकाउन्टबिलिटी ल्याब नेपाल बताउछ ।
मनमाया भट्टराई पंगेनी
मनमाया भट्टराई पंगेनीका हजुरबुबा गाउँका बुद्धिजिवी कहलिन्थे । बि।स। २०१० साल तिरको कुरा हो, मनमायाकी आमा सानै थिईन । उनले पढ्ने ईच्छा देखाईन् । मनमायाका हजुरबुबाले मनमायाकी आमालाई विद्यालय भर्ना गरिदिए । पढाई राम्रै चल्दै थियो । ४ कक्षाबाट ५ कक्षामा जाने बेलामा मनमायाकी आमाको भाई जन्मिए । अब उनले पढाई छोडेर भाईको हेरचाह गर्नुपर्ने भयो । त्यसै बेला उनको ठुलदाईलाई पढ्न बनारस पठाईयो । मनमायाकी आमाको पढाईमा त्यहीनेर पूर्णबिराम लाग्यो । उनको विवाह पनि नपढेकै व्यक्तिसँग भयो । त्यसमा पनि धेरै नै उमेरको अन्तर भएको व्यक्ति । छोरीको रुपमा मनमाया जन्मिईन । आफु पढ्न नपाएको कुराले जहिले पनि उनको मन पोल्दथ्यो । त्यसैले पनि उनी छोरीलाई धेरै पढाएर सरकारी सेवाको ठुलो ओहोदामा पुगेको हेर्न चाहन्थिन् । छोरीलाई पढाउन भनेजस्तो सजिलो थिएन । मनमायालाई कक्षा १ मा भर्ना गर्न उनकी आमाले साहुसँग ऋण लिएकी थिईन । उनकी आमाले त्यस बखत जिल्लाको बडा हाकिमको रवाफ देखेकी थिईन् । उनी छोरीले पनि जिल्ला सम्हालेको हेर्न चाहन्थिन् । मनमायाले पनि आमाको सपनालाई कमजोर बनाईनन् । १ कक्षा देखी १० कक्षा सम्म नै प्रथम भईन् । त्यस बापत कहिल्यै पनि शुल्क तिर्नु परेन । बि।स। २०५३ सालमा उनी अहेवको रुपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिन् ।
२०६३ सालमा उनले शाखा अधिकृतमा नाम निकालेर महिला विभागमा पदस्थापन भईन् । सिंह दरबार गेट अगाडी बादी समुदायले गरेको बिरोध कार्यक्रमले उनको मन छोएको थियो । विभागमा आईसकेपछि उनले यो विषयमा काम गर्नपाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । त्यो समुदायमा, विशेष गरेर महिलाको समस्या के हो रु भनेर अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव महानिर्देशक समक्ष पेश गरिन् । महानिर्देशकले उनिमाथी भरोसा गरे । उनले दाङ, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र बाँके जिल्लामा गएर तथ्यांक संकलन गरिन् । जम्मा १४३७ घरधुरी बादी समुदायको भएको पत्तालाग्यो । अध्ययनबाट उनीहरूलाई शसक्तिकरण पनि आवश्यक छ भन्ने देखियो । प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाईयो । त्यसपछि बादी व्यवस्थापन समितिको स्थापना भयो । त्यो लगत्तै नेपाल सरकारले घर विकास कार्यक्रम र महिला शसक्तिकरणको कार्यक्रम पनि ल्यायो । त्यसपछिको प्रभावकारिता अध्ययन सर्वेक्षणमा, ति कार्यक्रममा सहभागि महिलाहरु विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध भएको, व्यवसाय गरिरहेको पाईयो ।
२०७४ सालमा खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत सह–सचिवमा नाम निकालेपछि उनले निजामती किताबखानाको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाईन् । त्यहाँको सबै भन्दा ठुलो समस्या फाईलहरू व्यवस्थित नहुनु थियो । त्यसको एउटा कारण, प्रविधिको समुचित प्रयोग नहुनु थियो भने, अर्को कारण केही कर्मचारीको फाईल छैन भनेर कामबाट पन्छिने बहाना थियो । उनले त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर सेन्ट्रल फाईलिङ सिस्टमलाई कार्यान्वयनमा ल्याईन । यसो गर्दा आ।व। २०७४÷२०७५ मा मात्र करिब ५ करोडको राज्यकोष असुली भयो । अहिले त्यो प्रणालीले निरन्तरता पाएको छ । त्यसरी हरेक व्यक्तिको विवरण सजिलै निगरानी गर्ने संयन्त्र निर्माण भएपछि गलत विवरण पेश गरेर राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्तीको अन्त्य भयो ।
महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी कस्तो हुन्छ भनेर कार्यालयमा हेर्न आए..!!